Tun Tun's Photo Diary: January 2017
2013-Dec-20, အင်းဝ မြို.ဟောင်းက နာမည်ကြီး Attraction နေရာတခုဖြစ်တဲ့ ဗားကရာ ကျောင်းကို ရောက်သွားတယ်။ ဗားကရာ ကျောင်းက ဘာနဲ.တူလဲဆိုတော့ မန္တလေးက ရွေကျောင်းကြီး နဲ. တူတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေကျောင်းကြီးကတော့ အနုပညာ လက်ရာပိုပြီး အနုစိတ်တာပေါ့။ ဒီကျောင်းမှာတော့ ဘုန်းကြီးတွေ နေတယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီကျောင်းထဲမှာပဲ ဘုန်းကြီးတွေက ကိုရင်လေးတွေ၊ ကလေးငယ်လေးတွေကို စာတွေ သင်ပေးနေတာလဲ တွေ.ခဲ့တယ်။
at 1/24/2017 09:29:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Innwa, Mandalay, Myanmar
at 1/13/2017 09:55:00 PM Links to this post 1 comment:
2013-Dec-18, မြင်းမထိလှိုဏ်ဂူ ကို ဆိုင်ကယ် Taxi နဲ.သွားပြီး အပြန်မှာ တည်းတဲ့ ဟိုတယ် ရှေ.မှာပြန်ချပေးပါတယ်။ နေမ၀င်သေးတာနဲ. ဟိုတယ် ရှေ.က တောင်ကုန်းလေးတွေ.လို. အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားခဲ့တယ်။ တောင်ကုန်း ကို လမ်းမကနေ လှေကားထစ် အတိုင်းတက်သွားရုံပါပဲ။ တောင်ကုန်းအပေါ်မှာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းရှိပုံပေါက်တယ်။ အပေါ်မှာဆို View မယ့်ပုံပဲ၊ ပြီးတော့ Sunset လဲ ကြည့်လို.ရလောက်မယ်ထင်ပြီးသွားခဲ့တယ်။
at 1/04/2017 11:14:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Kalaw, Myanmar, Myanmar Food
Kalaw Day 1 (Myin Ma Hti Cave , Hill Top Villa Resort & Kalaw Train Station)
2013-Dec-18, ကလောမြို.နားက လမ်းလျှောက်သွားလို.ရတဲ့ ရွေဥမင်ဘုရားနဲ. နှီးဘုရားကို သွားပြီး။ ညနေပိုင်း ဆိုင်ကယ် Taxi နဲ. မြင်းမထိ လှိုဏ်ဂူနဲ. Hill Top Villa Resort ကိုသွားခဲ့တယ်။ ဆိုင်ကယ် သမားကို ၆၀၀၀ ပေးရတယ်ထင်တယ်။ မြင်းမထိ လှိုဏ်ဂူက တော်တော်လေးတော့ သွားရတယ်။ လမ်းမှာလဲ လူပြက်တယ်။
at 1/02/2017 10:47:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Flower, Kalaw, Myanmar